ချစ်စံအိမ်: October 2012
Posted by ချစ်စံအိမ် at 6:07 PM 18 comments:
သာတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ 
Posted by ချစ်စံအိမ် at 8:46 AM 14 comments:
အလင်းရောင်မလာခင် မနက်တိုင်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဈေးတောင်ခေါင်းပေါ်ရွက်ကာ လူမမယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုရိုးသားစွာဈေးရောင်ကျွေးခဲ့တယ်..
သူမဟာ အနိုင်းမဲ့မေတ္တာတွေးနဲ့ ကျွန်မတို့ ညီမနှစ်ယောက်ကိုပေးနိုင်စွမ်း
ခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင် အမေပါ..သမီးကြီး အမေဈေးသွားရောင်းတော့မယ်.. မုန့် စားဖို့ ထားခဲ့တယ် ..ညီမလေးနိုးလာရင်သေချာကျွေးလိုက်နော်...ရောင်းနေတဲ့ ကောက်ညှင်ထုပ် ..မုန့်ဖက်ထုပ်များကို ကိုယ်တိုင်းတော့အငက်ခံကာ ကျွန်မတို့ ညီမနှစ်ယောက်အတွက်တော့..မနက်တိုင်းချန်ထားနေကြ..
နေပူ မရှောင် မိုးရွာမရှောင် တစ်ရွာဝင် တစ်ရွာထွက် ဈေးတောင် ကိုခေါင်းပူပူရွက်ရင်းးး ကျွန်မတို့ ကို ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့တာ... အမေပါ.. ပညာသင်ချိန်ရောက်လို့ ကျောင်းတက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အမေရဲ့ အသိ
စိတ် အရင်ကထက် ပိုပင်ပန်းလာခဲ့ရရှားတယ်.. ငါသမီးလေးတွေ လူ့ အောက်မကျအောင် မျက်နာ မငယ်ရအောင် .. သူများသားသမီးတွေလို ပညာသင်ခွင့်ရအောင်.. အမေအလုပ်ကိုကြိုးစားခဲ့ရပြန်တယ်..
အသက်လေးရလာတော့ပင်ပန်းဒဏ်ကိုအံတုရင် ငါ့သမီးတွေအတွက်ဆိုတဲ့ဇောနဲ့ နေ့ မနား ညမနား လောကဓံကို မိန်းမသားတစ်ယောက်တည်း အားအင်အပြည့်ရုန်းကန်ရင်..သမီးတွေ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်တာအမေ
မြင်ရရင် သေပျော်ပါပြီး ... သမီးတို့ ရယ် ဆိုတဲ့ ..အမေစကားသံ.. မျှော်လင့်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ..မညည်းမငြူ ဘ၀ ကို အရှုံးမပေး.. ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေနဲ့ ဖြစ်မလည်း...မိခင်ဆိုတဲ့ အားအင်တွေကလွဲ
အခြားတွေးစရာမရှိနိုင်..ငါဈေးသည် ..ဖြစ်လို့ ငါသမီးတွေဘယ်တော့မှဈေးသည် မဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံ..........ှ..........အမေ ဒီနေ့ နေမကောင်းဘူး မလား ..သမီးဈေးရောင်းထွက်မယ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ .
အမေ ဘာမှမဖြစ်ဘူး.. သမီး.. ညီမလေးကို ထိန်းရင်းစာကျက်နော်.. အမေဈေးရောင်းထွက်လိုက်အုံးမယ်.....နိုင်းယှဉ်လို့ မရတဲ့အမေ့ မေတ္တာ..သားသမီးတွေအရွယ်ရောက်လို့ ပညာစုံ .ကြင်ယာပါစုံတော့ အိုမင်းမစွမ်းသာတဲ့
အမေအို ပီတိဆေးတွေစား.. သားသမီးတွေအတွက်ဆုတွေ မနားတမ်းပေးနေလိုက်တာ..ခန္ဓာမစွမ်းနိုင်တော့ပေမဲ့ မေတ္တာတရားတွေကစွမ်းနေသေးတာကို..သားသမီးတွေဆိုးသမျှကို ...မေတ္တာမပျက်..
အချစ်မလျော့ပဲ.. ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အမေ...နောက်ဆုံး အိမ်အိုကြီးမှာ အမေအိုတစ်ယောက်တည်း.. အထီးကျန်နေချိန်တွေမှာတောင် ငါ့သားသမီးတွေ အဆင်မှပြေရဲ့ လား... နေထိုင်ကောင်းကြရဲ့ လာ...
အလုပ်အကိုင်တွေရော ကောင်းကြရဲ့ လား..ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကြား.. စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ မေတ္တာတွေမကုန်နိုင်...သံယောဇဉ်တွေမကုန်နိုင်မခန်းနိုင်..သူမဟာ အမေပါ..
ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်တဲ့..မေတ္တာတွေနဲ့ ..
သူမရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ နာမည်က အမေ..
သူမရဲ့ အလှဆုံး အချိန်က ရင်သွေးငယ်ကို
လောကဓံကို အံတု သားသမီးလက်ကိုဆွဲ
သူမမျက်ဝန်ဟာ အလှဆုံး အချိန်နဲ့ 
သူမဟာ... အမေ.. အနှိုင်မဲ့မေတ္တာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ..
ပုံလေးတွေကိုဂူဂဲလ်မှာတွေ့ လို့ အမေမေတ္တာရေးဖွဲ့ ချင်စိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့ လိုအပ်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ 
Posted by ချစ်စံအိမ် at 6:46 PM 17 comments:
Posted by ချစ်စံအိမ် at 5:00 PM 20 comments:
လွတ်လပ်မှုဟာ ငါတို့ ရဲ့ အကောင်းဆုံး မိခင်ဖြစ်တယ်။။ လွတ်လပ်မှုက လူသားတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးအတွေ့ အကြုံဖြစ်တယ်..
လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ငါတို့ ရဲ့ ဘာသာစကားမှာ မြတ်နိုးစရာ တန်ဖိုးထားစရာ အကောင်းဆုံး စကားလုံးဖြစ်တယ်။။
ဒါကြောင့် ဒီစကားလုံးကို ပေါ့ပေ့ါတန်တန်နေရာမှာ တလွဲမသုံးသင့်ဘူး။။
လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လူမျိုးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိန်သိမ်းနိုင်ပဲ လွတ်လပ်မှုကို မရနိုင်ဘူး။။
လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ခွင့်ရှိနေတာကို မသုံးပဲ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို လိုချင်တာဟာ အဆင့်ကျော်နေပါတယ်..။။
ပေးမှရတဲ့လွတ်လပ်မှုဟာ လွတ်လပ်မှုအစစ်မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူကမှလွတ်လပ်မှုကိုပေးလို့ မရဘူး။။
လွတ်လပ်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့သူဟာ လွတ်လပ်မှုနဲ့ မတန်ဘူး။။ လွတ်လပ်မှုနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုဟာ လက်တွဲပြီးသွားတယ်။။
လွတ်လပ်မှုက အန္တရယ်များတယ် ဒါပေမဲ့ လွတ်လပ်မှုမရှိတာက ပိုပြီးအန္တရယ်များတယ်။။
ဥာဏ်နုတုန်းမှာ ကောင်းကောင်းစားရဖို့ ကောင်းကောင်းနေရဖို့ မှန်းတယ်။။ ဥာဏ်နည်းနည်းမြင့်လာရင် ပညာတတ်ဖို့ မှန်းတယ်။ အသိဥာဏ်အမြင့်ဆုံးကို
ရောက်ရင်တော့ လွတ်လပ်မှုကို မှန်းတယ်။။ စိတ်ထားနဲ့ အသိဥာဏ်မြင့်သွားလေလေ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးလေပဲ။။
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့သူဟာ လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့သူ လွတ်လပ်မှုကိုနဲ့ မထိုက်တန်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်။။
လွတ်လပ်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်ရင် လွတ်လပ်မှု ပျောက်သွားမယ်။။ ရှိနေတဲ့လွတ်လပ်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့သူဟာ ပိုပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့လွတ်လပ်
မှုကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှမရနိုင်တော့ဘူး။။ ရထားတဲ့လွတ်လပ်မှုကို မသုံးပဲနေသူဟာလည်း ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့လွတ်လပ်မှုကို မရနိုင်ဘူး။။
ရတဲ့လွတ်လပ်မှုကို အပြည့်အ၀ သုံးနေသူပဲ ပိုပြီးလွတ်လပ်လာမယ်။။
Posted by ချစ်စံအိမ် at 3:51 PM 14 comments:
မင်္ဂလာပါရှင်...... လမင်းအခုတလောဘာစာမှရေးလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်.. ဘာကြောင့် ဘာကြောင့် ?
ပို့ စ် မရေးနိုင်တော့ မနှစ်ကသွားခဲ့တဲ့ Ocean city က ဓာတ်ပုံလေးတွေပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
လမင်းတို့ နေတဲ့နေရာနဲ့Ocean city ကို ကားနဲ့ (၄) နာရီမောင်းရပါတယ်..
လမ်းတစ်လျှောက် သာယာသလို ကြည့်လို့ ကောင်း ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ လည်း ကောင်းပါ၏။။။။
နားတုန်း လမ်းဘေးမှာ အများကြီးပဲ.. ဘူသူမှလည်းရှိဘူး.. ခူးချင်တာ..ဟီး..
ကလေးဆိုတော့ကစားကွင်းပဲ အရင်မျက်လုံးထဲတွေ့ တယ်..:)
သဲပုံလေးကိုသေချာကြည့်နော်..မနေ့ ကမုန်တိုင်းလာထားတော့ရေက မပြာဘူးကွယ်..:(
အဲမှာ စီးကြတဲ့ကားလေး အပျော်ပေါ့ ပိုက်ပိုက်ကုန်တယ်. မစီးပါဘူး..:D
တံတားကအရှည်ကြီးပဲ.. လေအရမ်းတိုက်တယ်.. ဒါပေမဲ့လေသန့် တယ် အသက်ရှူရတာအရမ်းကောင်းတယ်...
ရေးကအေးတယ် လေတိုက်တယ် လှိုင်းကြောက်လို့ ရေထဲတောင်မဆင်ခဲ့ပါဘူး..တိန်..
ကစားခဲ့တယ်.. $ 120 နိုင်ခဲ့တယ်.. အထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မပေးလို့ မရိုက်ရပါဘူး..:(
သဲနဲ့ လုပ်တာနော်..တော်လိုက်တာ လမင်းအတိုင်းပဲ..:D
မင်္ဂလာပါ ပင်လယ်ကြီးရေ.. နင်ငိုနေတာလားဟယ်...ငိုပါနဲ့ နော်..
စားတော့မယ်.. ကစားတုန်းကနိုင်ထားတော့ လမင်းပဲရှင်းလိုက်တယ်.. ကုန်ရော...:(
နောက်ဆုံးပုံ ကိုယ့်ပုံမပါအောင်ရွေးရတာ မူးနေတာပဲ.. အားလုံးလန့် ကုန်မှာစိုးလို့ ပါ..
$5 တဲ့ လမ်းလျှောက်တာကျန်းမာရေးနဲ့ ညီတယ်.. ထောက်ခံလား ပရိတ်သတ်ကြီး..:)
ညမအိပ်ဘူး.. ည11 လောက်ပြန်ရောက်တယ်.... ပိုက်ဆံကုန်သက်သာတာပေါ့..:)
Posted by ချစ်စံအိမ် at 3:58 PM 15 comments:
ပန်းသီးရှိရာအလည်တစ်ခေါက်သို့ မဟုတ် တောဈေး
လမင်းအကြောင်းပြောရအုံးမယ်.. စိတ်တိုလို့မနေ့က စိတ်ကူးလေးရလို့ ၀ထ္ထုတိုလေးရေးပါတယ်..
ပေါ့လျော့မှုကြောင့် စာလေးပျောက်သွားတယ်.. တကယ်ပဲ.. အချိန်ပေးပြီးရေးထားတာ.. အခုလိုဖြစ်တော့
ညကအိပ်လို့တောင်မပျော်ဘူး... စိတ်တိုလို့ ...:D
အဲတော့ ပိုစ့်မတင်ရမဲ့ အတူတူ ဒီနေ့ သွားဖြစ်တာလေးပဲတင်ပေးလိုက်တာ.. လမင်းက လူတွေများပြီး..
မြို့ ပြတွေထက် တောသဘာဝကိုပိုချစ်တယ်.. အပင်လေးတွေကို ချစ်တော့ ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်ရာကိုပဲ သွားတယ်... သွားမိတော့လည်း ရိုက်မိတယ်.. ရိုက်မိတော့လည်းတင်မိတယ်......
လမင်းတို့ ဘက်ကအိမ်တွေ ဈေးကြီးတယ် ၀ယ်နိုင်ဘူး
ပန်းသီးခြံသွားရာလမ်းသို့ မဟုတ် တောလမ်းပါ..:P
ရောက်တော့မယ် သာယာလိုက်တာနော် သူတို့ တောက..
ပထမဆုံး ရိုက်တဲ့ပုံ ငရုပ်သီးတွေပါ..ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်အရင်ကြိုက်သည်..
Hall0ween ရောက်တော့မယ် ဒီလ ၃၁ ဆို အခုတည်းကရွှေဖရုံသီးကို ၀ယ်နေကြပါပြီ..သူတို့ကအလှထားတယ် ကိုယ်ကချက်စားမယ်..
လာပါပြီ အဓိက အသီး သူ့ ကိုဝယ်ဖို့ သွားတာပါ..
ဒီမှာက မပါမဖြစ်တဲ့အကောင်ပါပဲးး
ဟီး ၀ယ်လာတာ... အိမ်ရောက်တော့ဒါပဲပါလာတယ်.. ခီခီ.. ပန်းသီးတွေအ၀စားလာပြီး အခုနှပ်တော့မယ်နော်... ပုံတွေတင်ပြီးသွားတော့အိပ်ချိန်ရောက်ပါပြီးရှင်... အားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ.. ဂွတ်နိုက်ပါ..
Posted by ချစ်စံအိမ် at 6:53 PM 28 comments:
ရှင်ကို အရမ်းချစ်တယ်.... တကမ္ဘာလုံး ရှင်ဘက်မှာ မရှိရင်တောင်.. ရှင့်ဘေးမှာ ကျွန်မရှိတယ်.. ရှင့်ကို ချစ်တယ်... လူတစ်ယောက်မှ သီချင်းမဆိုရ...
အလှူမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံလေးများကို အောက်ကလင့်တွင်လည်း သီးသန့်တင်ထားပေးပါတယ်ရှင်..။ >>> ကညင်ကုန်းကျေးရွာအလှူမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံလေးမျာြး...